Ka qaybqaado Deeqaha SDWO Relief Project SDWO Relief Project oo 5 qoys oo danyar ah min $100 doolar oo gargaar ah gaadhsiisay samafal@sdwo.com
SDWO (Hargeisa 14/12/2011) Haayada SDWO Relief Project oo kamid ah haayada ka shaqeeya arimaha samafalka dadka danyarta ah ayaa waxay gaadhsiisay lacag dhan $500 Dollar qoysas kamid ah danyarta magaalada Hargeisa kuwaas oo hore loogu baahiyey shabakada wararka iyo arimaha samafalka ee haayada sdwo, Qoysaskan ayaa waxay isugu jireen Agoomo, Gabadh yar oo indho iyo dhago la, kuna dhalatey, gabadh yar oo curyaamad ah oo labad gacmood iyo labada lugood midina shaqaynaynin iyo wiil yar oo madaxa biyo kaga jiraan, iyo waliba sidoo kale hooyo curyaan ah iyo gabadh aqalkeedi ka gubtey
Deeqdan u danbaysay ayaa naga soo gaadhay jaaliyadaha muslinka ah ee ku nool dalka faransiiska oo horena deeqdii balaadhnayd ee 9 kun ee doolar ee raashinka 3da xaafadood loogu qaybiyey ay naga soo gaadhay.
Deeqdan ayaa waxa laga kala gaadhsiiyey dadkii loogu soo talogalay oo ay ka mid yahiin.
Waxa $100 doolar la gudoonsiiyey gabar yar oo 17 jir ah oo ku dhalatay lugaha iyo gacmaha oo aan shaqaynin had iyo jeerna u baahan gargaar joogta ah dhinc walba noloasha. Yartan yar ayaa ku nool buul yar oo ku yaala xaafada Goljano ee magaalada Hargeysa. Yartan waxay u baahantahay kaalmo degdeg ah oo ay ugu horeyso hooy ay gasho, hor ilaahay ku soo taakulee yartan oo tan iyo sidii ay u dhalatay dhibtani haysatay, waxaad kala soo xidhiidhi kartaa samafal@sdwo.com
$100 doolar oo la gudoonsiiyey waalidka wiilka yar ee Khaalid Mahad Maxamed oo ah wiil yar oo uu haleelay xunuun kaga dhacay madaxa kaas oo sababey in dhamaan xubnahiisa shaqaynayey ay joojiyaan shaqada.
Tan iyo intii SDWO ay soo bandhigeen sawiradiisa ayaa waxa suurtogashay in deeqo kala duwani ay soo gaadheen reerka taasi oo suurtogelisay in la dhigo dhakhtarka Adna oo lagu daaweemayo dhawrkii bilood ee u danbaysay.
Waxa iyadana maanta nasiib u heshay oo $100 Doolar la gudoonsiiyey Hooyo Sahra Cismaan oo haysta cauurt agoon ah oo aabahood dhowaan geeriyooday, qoyskan ayaa ah mid aad uugu dayacan magaalada hargeisa kuwaas oo aan ku haysan wax gacan qabsi ah isla markaana helin nolol maalimoodkooda ama wax ay quutaanba isla markaasna habeenada qaarkood gaajo ku seexda kuna soo toosa.
Hooyo Sahra Cismaan iyo Hooyo Deeqa Maxamud
Waxa iyaduna sidoo kale maanta nasiib u heshay in $100 doolar la gudoonsiiyo Hooyo Deeqa Muxumed Diiriye oo haysata caruur yaryar oo aan haysan hooy hagaagsan ka dib markii bishii ramadaan uu buulkii yaraa ee cariishka ahaa uu ka gubtay oo wixii ay hasteen ama cunto ha noqoto, gogol iyo dharkii ay xidhanayeenba ay kaga basbeeleen.
Waxa kale oo iyaduna Nasiib u heshay in la gudoonsiiyo $100 doolar Hooyada dhashay gabarta yar ee indho la,ida iyo dhego laida ku dhalatay ka dibna inta ay dab ku dhacday sida xun u gubatay Hodan Cabdi Cali waa 16 jir. Yartan oo uu dhawac halis ah ka soo gaadhay dabkaasi ka dibna dawo iyo daryeel la,aan darteed ay lugtii infuction ka galay sida sawirka hoose ka muuqata.
Tan iyo intii SDWO ay soo bandhigtay warbixinta iyo sawirada gabadhan ayaa deeqo dhawr ahi soo gaadheen qoyska taasi oo u fududaysay in dhakhtar la dhigo lagula tacaalo xaaladeeda nololeed iyo dhaawacii ka soo gaadhay dabkaasi.
Deeqdan ayaa waxa gaadhsiiyey Yusuf Waraabacade oo SDWO Relief uga wakiil ahaa deeqadani inay dadkaasi gaadho. Ilaahay ha ka jazaai siiyee. Waxa kale oo aan ilaahay uga baryaynaa dadkii soo bixiyey iyo intii ka soo ururisay, dadkii na soo gaadhsiiyey iyo qof wal oo ka qaybqaatayba inuu ilaahay ka abaal mariyo, halkii ay ka soo saareena wax ka badan oo uga khayr badan inuu ugu bedelo.
Dadka deeqdan la siiyey ayaa iyagoo dareenkooda cabiraaya waxa ay si kala duwan uuga hadleen lacagtan iyo qiimaha ay u leedahay waxaana kamid aheyd hooyo Kinsi Cabdi Kheyre oo in muddo ahba kula jirtay Hospitalka Adna wiilkeeda yar ee madaxu biyaha kaga jiro taas oo aad uugu dhib mudan waxaaney tidhi: Waxaan u mahadcelinay celinayaa Alle sidoo kalena waxaan Alle uugu baryayaa dadka i soo saaciday inuu ciwadkeeda oo kheyr qaba siiyo. dhab ahaantii lacagtani aniga waxay ii tahay mid qiimo gaar leh ii leh waayo waxaan ahay qof danyar ah oo dhibaateysan wixii dhaqaale i soo galana waad dareemi kareysaan micnaha ay ii leedahay
Deeqaha noocan ah ayaan aheyn kuwii ugu horeeyey ee hayada sdwo soo gaadhsiiso qoysaska danyarta ah laakiin waxaa ka horeeyey qaar kale oo fara badan
Siday ahayd lugta ay yartu ka gubatay intii aan la geynin dhakhtarka
Wiixii Alle dartii aad u bixiso waxaad ka helaysaa isaga